सावधान ! मङ्कीपक्स भाइरस नेपालमा फैलन सक्ने भन्दै सरकार द्वारा सावधानी अपनाउन आग्रह - Mitho Khabar
सावधान ! मङ्कीपक्स भाइरस नेपालमा फैलन सक्ने भन्दै सरकार द्वारा सावधानी अपनाउन आग्रह
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on सावधान ! मङ्कीपक्स भाइरस नेपालमा फैलन सक्ने भन्दै सरकार द्वारा सावधानी अपनाउन आग्रह
सावधान ! मङ्कीपक्स भाइरस नेपालमा फैलन सक्ने भन्दै सरकार द्वारा सावधानी अपनाउन आग्रह !
मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण फैलिनसक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । अहिले विश्वमा मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण फैलिरहेकोले नेपालमा पनि सम्भावित खतरा हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘विदेशबाट आउनेहरुले कम्तीमा दुई हप्ता क्वरेण्टीनमा बसिदिनुहोला । व्यक्तिगत सरसफाइको कुराहरु बढी महत्त्वपूर्ण छ । कुनै पनि चिजहरु सकेसम्म नछुने, छोइहाले साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा हामीमा यदी भाइरस आएको छ भने पनि निस्क्रिय भएर जान्छ । कसैको शरीरबाट निस्किएका छिटाहरु हाम्रो शरीरमा आइनपुगोस् र हामीबाट अरुको शरीरमा नपुगोस् भन्न मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कोही त्यो क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति छ, जो ज्वरो आएको छ, शरीरमा फोका आएको छ, जिउ चिलाउने भएको छ भने तत्काल नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सम्पर्क गर्याैँ भने त्यसको उपचार गर्न सहज हुन्छ र अरुलाई पनि सर्दैन ।’ मङ्कीपक्स शरीरमा प्रवेश गरेपछि फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरु सुन्निनेजस्ता समस्या देखापर्ने बताउनु भयो । उहाँले यो सङ्क्रमण प्रायजसाे बालबालिकाहरुमा देखापर्ने भएकोले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
मङ्कीपक्स भएर मृत्यु हुनेको दर १० प्रतिशत रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले मङ्कीपक्सका कारण शरीरमा देखिएका लक्षण करिब तीन महिनापछि आफैँ हराएर जानसक्ने भएकोले डराउन आवश्यक नरहेको तर स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मङ्कीपक्स भएको तीनदेखि ४ हप्तासम्म लक्षण रहने र मानिसबाट मानिसमा सर्नेसक्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले मङ्कीपक्सको खाेप उत्पादन भएर प्रयोगमा आइसकेको पनि बताउनु भयो ।
याे पनि, गर्मि लागेसँगै टाइफाइडकाे जाेखिम धरै, यस्ता छन् यसका लक्षण र घरेलु उपचार विधिहरु, हेर्नुस् तलकाे भिडियाेमा:-
ज्ञानेन्द्रले रविलाई शुभकामना दिदै भने: राजनीतिमा स्वागत छ, भ्रष्टाचारमुक्त हाम्रै पालामा हुन्छ
राजेन्द्र लिङ्ग्देन प्रधानमन्त्री,रवी लामिछाने गृहमन्त्री आहा सुन्दै कत्ती आनन्द